Xildhibaan Farxiya Muumin “Labada xeer ee ka hadlaya Dembiyada Jinsiga waa kuwo is-diidan” – Kalfadhi
Xildhibaan Farxiya Muumin “Labada xeer ee ka hadlaya Dembiyada Jinsiga waa kuwo is-diidan”
Xildhibaan Farxiya Muumin oo tirsan Golaha Shacabka, oo ka hadleysay labada xeer ee ku saabsan Dembiyada Jinsiga ayaa sheegtay in labadooduba ay yihiin laba xeer oo is-diidan.
“Xeer Baarlamaan uu sameeyay ma lahan balse hal xeer ayaa waxaa uu naga soo gaaray xukuumadda, sidoo kale ma naqaanno xeerka kale meel uu naga soo gaaray” ayey sheetay.
Xildhibaan Farxiya Muumin, ayaa sheegtay in xeer kasta Baarlamaanka uu kusoo gaaro saddex jid.
“Jidka koowaad ayaa ah in xeerka uu ka yimaado Golaha Wasiirrada, jidka labaadna waxaa uu yahay in xeerka uu ka dhasho Baarlamaanka iyo jidka saddexaad oo ah in xeerka uu ka yimaado Ururada Bulshada Rayidka isagoo ay la socdaan saxiixyo badan”.
Somali Public Agenda oo taageero ka heleysa IMS, interpeace iyo platform-ka Kalfadhi ayaa todobaadkii hore magaalada Mogadishu kusoo bandhigay falanqeyn is-bar-bar-dhigid ah oo ku saabsan hindise-sharciyeedyada Dembiyada Jinsiga ee Soomaaliya, kaas oo doodo xooggan ka dhex abuuray bulshada iyo Baarlamaanka dalka.
Abwaan Ilka Case oo ka codsaday beelaha in ay soo xushaan shaqsiyaad wanaagsan oo xildhibaanno u noqda